Maia: zvigadziriso zviri kuuya zveiyi koloni kuvaka simulator | Linux Vakapindwa muropa
Mhinduro dzave kuwanikwa pa chitoro chemhepo yeiyo koloni kuvaka simulation vhidhiyo yemutambo inonzi Maia. Iyo yekuvandudza iri chigamba ine hukuru hukuru uye shanduko yemavhidhiyo mutambo, uyo nenzira, mukutanga kuvhurwa zvinoita sekunge kuti haishande pamwe neNVIDIA mifananidzo yemakadhi, kunyange hazvo dambudziko ratove ratomhan'arwa kune vanogadzira uye kugadzirisa kuri kutarisirwa kuitira kuti zvese zvishande sezvanga zvichitarisirwa.yakanaka kune ino siginecha GPU, saka usanetseke nezvazvo.
En chigamba chitsva zvinhu zvakaita sekatsi zvakawedzerwa, nekuti munguva yakapfuura ivo vakatowedzera kugona kugona kusanganisira imbwa. Saka isu tinogona kunakidzwa nezvipfuyo mune ino chaiyo yehupenyu simulator mukati mekoni mune yekunze nzvimbo. Imbwa dzinogona kutenderera base nekuzvidzivirira kubva kune vekune dzimwe nyika vavengi kana vatorwa vekuzivisa. Alien AI yakagadziriswazve nemashandisirwo ayo anoita kuti iwedzere kusimba, semhedzisiro mhando dzese dzazvino dzakagadzirisa zvemagariro uye mapatani.
Shanduko dzakaitwawo maererano nemamiriro ekunze, ese akagadzirirwa kuti arege kumira kunakidzwa nemusoro uyu kune avo vanofarira rudzi urwu rwevamiririri uye vanoda sainzi venhema. Vagadziri vacho vakashandawo nesimba kuunza mamwe maFPS uye kugadzirisa mamwe matambudziko nekugadzirisa mamwe mabhugi aripo mushanduro dzakapfuura, uye sezvandambotaura pakutanga, vachiri kushanda kuunza shanduro nyowani dzechigamba nekuvandudza uye zvitsva zvinoshanda yemutambo wevhidhiyo Maia.
Nenzira, iwe unogona kuwana iyo peji webhusaiti yepamutemo yeprojekti kuwana runyorwa rwese rwechishandurwa shanduko kana rumwe ruzivo, i.e. iyo changelog. Pamusoro pekuiwana pane Steam sezvo ini ndasiya ndakabatana mundima yekutanga, inogona kuwanikwa pa itch.io, uye nenzira, ikozvino ine dhisikaundi ye44% ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maia: zvigadziriso zviri kuuya zveiyi koloni yekuvaka simulator